URayman Classic uyathengiswa okwexeshana | IPhone iindaba
Ubisoft ukhuphe iRayman Classic ukubhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-20 yenguqulo yokuqala kaRayman. Kulo mdlalo kuya kufuneka siqale iihambo ezintsha, njengoko uRayman, Enye yeemidlalo eziphambili zeqonga lonke ixesha. Ngokuqinisekileyo kwelona gqala, kuya kukwenza uyikhumbule loo midlalo ingapheliyo ukusukela oko yasungulwa kwimarike ngo-1995. Njengakwinguqulelo yoqobo, kuyakufuneka sijongane nobubi uMnu Dark obebile iProton Enkulu kwaye wayithimba Iinyulo. URayman uzakuba noxanduva lokukhulula ii-Electoons kwaye oyise uMnu Dark kwaye abuyisele umhlaba kwilahleko ehambisanayo.
URayman Classic unexabiso eliqhelekileyo le-4,99 euro kodwa ixesha elincinci, elingachazwanga ngumvelisi, sinokuzikhuphelela i-0,99 euro. Ukuba ungumthandi wale klasiki, ungathandabuzi ukusebenzisa eli thuba.
1 Iimpawu zikaRayman Classic
2 Iinkcukacha zikaRayman Classic
Iimpawu zikaRayman Classic
DLALA URayman, iqhawe lakho olithandayo nelazalwa ngo-1995.
YENZA kwakhona umhlaba ophilayo ophilayo kumdlalo wokuqala: Ihlathi eliCetyiweyo, Umhlaba weMidlalo yoMculo, iiNtaba eziBlue, Inqaba yeCandy ...
RUN, dodge, jump, punch your way through a wide range of levels in this classic platformer.
Amandla akhethekileyo ka-UNLEASH Rayman, ukusuka kwinqindi ye-telescopic ukuya kwi-pelicopter, kunye nokoyisa izidalwa ezinobutshaba.
FUNA KUNYE SIMAHLA ii-Electoons zokugqibezela onke amanqanaba kunye nokubuyisela umlinganiso we-cosmic.
Ncedisa abalinganiswa abonwabileyo kunye ne-iconic kwilizwe ngalinye njengeBetilla, iTarayzan okanye uJoe yangaphandle.
BEAT bonke abaphathi (Moskito, Mnu Sax, Mnu Dark…) kwiimbambano ezibalaseleyo neziqinisekileyo zokukhulula abahlobo bakho.
BEAT Imowudi yodumo ngobomi obubodwa, okanye ukhethe indlela yokuziqhelanisa ukuzama amaxesha amaninzi njengoko ufuna.
Iinkcukacha zikaRayman Classic
Uhlaziyo lokugqibela: 18-2-2016
IilwimiIsiSpanish, isiJamani, isiTshayina esenziwe lula, isiTshayina esiqhelekileyo, isiKorea, isiFrentshi, isiNgesi, isiTaliyane, isiJapan nesiRashiya.
Ikaliwe ngo- badala kuneminyaka eyi-9.
UkuhambelanaIfuna i-iOS 7.0 okanye kamva. Iyahambelana ne-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod Touch.
Esi sicelo ilungiselelwe ii-iPhone 4s ukuya phambili, ngoko akucetyiswa ukuyifaka kwi-iPhone 4.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » URayman Classic uyathengiswa okwexeshana